Taariikh Nololeedka Shah Rukh Khan, siduu ku gaarey heerka maanta, dhibtii soo martey, rikoorada uu dhigay, fashilka qabsadey, hantidiisa, iyo noloshiisa gaarka ah (Oo Update Ah) | Filimside.net
Home » Taariikhaha » Taariikh Nololeedka Shah Rukh Khan, siduu ku gaarey heerka maanta, dhibtii soo martey, rikoorada uu dhigay, fashilka qabsadey, hantidiisa, iyo noloshiisa gaarka ah (Oo Update Ah)
Taariikh Nololeedka Shah Rukh Khan, siduu ku gaarey heerka maanta, dhibtii soo martey, rikoorada uu dhigay, fashilka qabsadey, hantidiisa, iyo noloshiisa gaarka ah (Oo Update Ah)
Taariikhda: November 2, 2017
Dhalasho Wacan King Khan Oo 52-sano Jirsaday Iyo Taariikhdiisa Oo Update Ah:
Hordhaca Shah Rukh Khan Macluumaadka Ku Saabsan:
Shah Rukh Khan wuxuu ku caan yahay in loogu yeero SRK, waa atoore hindi ah, filim qarash gareeye iyo shaqsi ka qayb qaato barnaamijyada TV-yada ka baxa
Inta badan saxaafada waxay ugu yeertaa “Baadshah of Bollywood”, “King of Bollywood” ama “King Khan” wuxuu wax ka jilay in ka badanMajalada Los Angeles Times waxay ku tilmaantay inuu yahay “the world’s biggest movie star” oo micnaheeda yahay xidiga ugu weyn ama ugu caansan aduunyada! 80-filim ee uu ku leeyahay muuqaal marti ah iyo kuwo dhameestiran.
Khan wuxuu taageerayaal aad u fara badan ku leeyahay qaarada Asia iyo daafaha caalamka waxaana si gaar ah u taageeraan Hindida Diyasbarada ah ee qurba joogta ku ah daafaha.
Waa shaqsiga labaad ee ugu taajirsan ama hodansan marka laga hadlaayo xidigaha filimada jilaan wuxuuna hanti ahaan inka badan heestaa $650-milyan!
Sidoo kalena shaqada uu Bollywood-ka ka qabto wuxuu ku helay aqoonsi caalami ah iyo abaal marino aad u farabadan weliba 14-biladood oo ay shirkada Filmfare bixiso ayuu ku guuleestay!
Khan inta badan aflaanta uu jilo waxay xambaarsan yahay fariin noolaha dhan uusan ka maarmin: Jeceyl, arimaha jinsiga, arimaha faquuqa iyo xad gudubka, arimaha bulshada, farqiga aragtida diimaha ee bulsho weynta aduunka u dhaxeeyo iyo xanuunka dabiiciga ah ee bini aadamka asiibo.
Midaas waxay sababtay in SRK filimadiisa ay ka gudbaan xuduudaha Hindiya sidoo kalena ay noqdaan aflaan siweyn caalamka looga xiiseeyo.
King Khan waxay dowlada Hindiya siisay bilada 4-aad ee muwaadanka ugu darajada sareeyo la siiyo (Padma Shri) sidoo kalena dowlada France waxay siisay labada abaal marin ee darajada ugu sareyso xambaarsan Ordre des Arts et des Lettres iyo the Légion d’honneur.
SRK Iyo Bilawgii Noloshiisa Iyo Marxaladaha Uu Soo Maray:
SRK waa 49-jir wuxuuna dhashay 2 November 1965 asigoo ku dhashay magaalada New Delhi, xidigan 5-sano ee ugu horeesay noloshiisa wuxuu ku qaatay Manglore wuxuuna la noolaa ayeydiis Ifthikar Ahmed waxayna Ingineerka ugu sareeyo ka ahayd xiligaas dakada Manglore ku taalay 60-kii waana ayeydiis hooyadiis dhashay.
Sida laga soo xigtay Khan Ayeeydiis aabihiis dhashay Jan Muhammad waxay kasoo jeeda ama ka timid Afghanistan, sidoo kale aabihiis Meer Taj Mohammed Khan wuxuu kasoo jeedaa qowmiyada Pashtun (Pathan) wuxuuna ahaa dadka u ola oleeyo xurnimada Hindiya weliba wuxuu ahaa reer Peshawar oo haatan Pakistan ka tirsan.
Sida laga soo xigtay Khan sanadii 2010 xogtii ugu dambeesay waxaa lagu sheegay in qoyskiisa dhanka aabayaashiisa ay ku nool yihiin meesha loo yaqaan Shah Wali Qataal ee ka tirsan Peshawar, Pakistan
SRK aabihiis wuxuu ka tirsanaa kooxda halgamaagii Muslimka ahaa Khan Abdul Ghaffar Khan ee kasoo horjeeday gumeysigii Ingiriiska dhul weynaha Hindiya ku heesteen
Sida darted SRK aabihiis Meer Taj Mohammed Khan wuxuu usoo guuray magaalada Delhi sanadii 1947 ka hor intii aan Hindiya la kala qeybinin oo aysan Pakistan ka go’in ayuu soo guuray.
SRK hooyadiis Lateef Fatima waxaa dhalay masuul sare oo Ingineer ahaa kaasi oo dowlada ka tirsanaa sidaa darteed SRK waalidkiisa waxay is guursadeen 1959.
Khan oo barta Twitter-ka ku qayaxaayo jinsi ahaantiisa iyo dhaqankiisa wuxuu yiri “Aniga labo ayaan u qeybsamaa half Hyderabadi (hooyadeey ayaa reer Hyderbad ah) iyo half Pathan (Aabahey ayaa reer Pathan ah) sidoo kalena dhaqan Kashmiri ayaan leeyahay madaama ay ayeydey hooyadey dhashay reer Kashmir tahay.
SRK Iyo Aabihiis Meer Taj Mohammed Khan
SRK wuxuu kusoo koray Rajendra Nagar oo daris la ah Delhi, aabihsii wuxuu ahaa markii dambe ganacsade maqaayad leh sidoo kalena nolol iska dhex dhexaad ah ayay ku noolaayeen.
Khan wuxuu wax ka bartay St. Columba’s School ee bartmaha Delhi ku yaalo wuxuuna ahaa arday waxbarashada aad ugu wanaagsan sidoo kalena Sports-ka wuxuu aad ugu fiicnaa kubada cagta iyo cayaarta Hockey loo yaqaan.
Weliba darajada ugu sareyso ayuu marwalbo ku baasi jiray wuxuuna noqday ardayda ugu buundada sareeyo taasi oo ku muteestay in la siiyo abaal marinta “Sword of Honour”.
Khan wuxuu aad ugu fiicnaa sidoo kale ruwaayadaha iyo bandhigyada iskuulka laga sameeyo weliba wuxuu aad isaga dhig dhigi jiri oo uu jecla matalaadoodaa Mumtaz iyo Amitabh Bachchan.
SRK xiligii waxbarashadiisa iyo yaraantiisii wuxuu saaxiib lahaa oo ay ruwaayadaha isla matali jireen Amrita Singh oo iyadana markii dambe atirisho noqotay.
SRK markii dambe wuxuu galay Hansraj College (1985–88) si uu darajada kowaad ee jaamacada qaybta Economics ama dhaqaalaha uga qaato sidoo kalena xidigan xiliga waqtigiisa uga soo haro wuxuu wax ka baran jiray Delhi Theatre Action Group (TAG) wuxuuna jilista filimada iyo mataalada ka bartay aqoon ahaan Director Barry John oo ah nin England ku dhashay balse Hindi filim sameeye tiyaatarada ahaa.
Kadib markii uu shahaadada darajada kowaad qaatay kadib wuxuu bilaabay shahaada jaamacada darahada labaad (Master Degree) asigoo ku taqasusay Mass Communications jamaacada Jamia Millia Islamia ayuu ka bartay.
Khan asigoo dhalin yar aya dhibaato hor leh lasoo daristay madaama aabihiis uu geeriyooday sanadii 1980 waxaana asiibay xanuunka Cancer-ka sidoo kalena hooyadiis sanadii 1991 ayay u geeriyootay xanuunka macaanka ama sokorta.
Khan walaashiis ka weyn Shahnaz Lalarukh ayaa iyadana ku dhacay cudurka niyad jabka iyo wax qabsi la’aanta kadib geeridii waalidkeed midaasna SRK waxay culees ku saartay inuu si gaar ah walaashiis u daryeelo.
SRK Iyo Shaqadiisii TV-ga Iyo Sida Uu Bollywood-ka Kusoo Galay (1988 – 1992)
SRK madaama uu aqoon yahan ahaa sidoo kalena uu xirfad ahaan shahaado ka heestay ruwaayad sameynta waxaa fursad shaqo siiyay ninka caanka ah ee lagu magacaabo Lekh Tandon si uu taxanihiisa TV-ga loogu tala galay Dil Dariya uu wax ka jilo sanadii 1988 ayaa la bilaabay sameyntiisa laakiin dib ayuu u dhacay daawashada taxanahan.
Sidaa darteed waxaa kasoo hor maray taxanaha kale Fauji kaasi oo noqday midkii ugu horeeyay TV taxanaha SRK jilaayo ee la daawado wuxuu ka ahaa hogaamiye asigoo ku jilaayay magaca Abhimanyu Rai.
Kadib waxaa ugu xigay oo uu amaan badan ku helay taxanaha Circus (1989–90) oo uu iska lahaa Aziz Mirza iyo taxanaha kale Idiot (1991) oo uu lahaa Mani Kaul.
Wixii markaas ka dambeeyay taxano badan ayuu wax ka jilay oo uu qaarkood door kooban ku lahaa kuwana door dhameestiran ku laha waxayna dadka qaab jiliinkiisa ku tilmaameen inuu la mid yahay Dilip Kumar balse SRK waxaas ahmiyad ma siinin. Khan wuxuu diiday inuu filim jilista ka qayb qaato asigoo dareensanaa inaysan la fiicneyn asi ahaantiisa
SRK go’aan wuxuu ku qaatay inuu filim jilista bilaabo April 1991 asigoo sheegay in murugada geerida hooyadiis ay ka hari karto kaliya marka uu shaqo badan qabto gaar ahaan dhanka fanka isku hilmaan siiyo
Wuxuuna kasoo guuray magaaladii uu waligiis ku noolaaa Delhi asigoo yimid Mumbai si uu Bollywood-ka shaqo kaga bilaabo nasiib wanaag 4-filim ayuu si dhaqsi ah ku saxiixday.
Dalabkii ugu horeeyay wuxuu ka helay Hema Malini oo u dhiibatay filimkeedii Dil Aashna Hai laakiin filimkan waxaa kasoo hormaray filimka Deewana ee ahaa midkii labaad ee uu saxiixdo waxaana tiyaatarada laga hor daawaday Deewana sanadii 1992 gaar ahaan bisha June halka Dil Aashna Hai la daawaday December 1992.
Filimka Deewana Khan waxaa la jileen Divya Bharti iyo Rishi Kapoor wuxuuna xidigan ku helay amaan badan asigoo filimkan Hit noqday sidoo kalena abaal marinta Filmfare atooraha Bollywood-ka ku cusub la siiyo midka ugu wanaagsan ayuu qaatay (Filmfare Best Male Debut Award).
Isla sanadii 1992 Khan waxaa usoo baxeen filimada Chamatkar iyo Raju Ban Gaya Gentleman wixii markaas ka dambeeyay masraxa Bollywood-ka si tar tiib ah ayuu usoo koray.
SRK Iyo Markii Uu Bilaabay Jilista Filimada Laadarnimada Iyo Aqoonsigii Uu Ku Helay (1993 – 1994)
Sanadii 1993 SRK wuxuu tijaabiyay doorar ay ka cabsan jireen atoorayaasha Bollywood-ka wuxuu ku jilay waji laadarnimo labada filim ee kala ah Darr iyo Baazigar labadan filim guulo taariikhi ah ayay gaareen sidoo kalena SRK aqoonsi caalami ah ayuu ku muteestay.
Filimka Darr wuxuu Khan u suura galiyay inuu xiriir taariikhi ah la yeesho filim sameeye Yash Chopra iyo shirkadiisa Yash Raj Films sidoo kalena filimka Baazigar abaal marinta atooraha ugu fiican oo ay shirkada Filmfare bixiso ayuu markii ugu horeesay ku qaatay.
Isla sanadii 1993 Khan wuxuu sameeyay filimkii Maya Memsaab kaasi oo muran badan dhaliyay waayo waxaa laga duubay muuqaal asigoo qaawan inkastoo gudiga jansuureynta filimada Hindiya ay muuqaalkaan diideen in bulshada la tuso
Khan muuqaalkii uu duubay dib ayuu oga qoomameeyay wuxuuna go’aan ku gaarin inuusan mustaqbalka filim dambe jirkiisa kusoo bandhigin ama muuqaal dareen uusan dumar la wadaagin.
SRK sanadii 1994 wuxuu la yimid filimka Kabhi Haan Kabhi Naa ee uu iska lahaa Kundan Shah, Khan doorka filimkan wuxuu ku tilmaamay midka uu ugu jecel filimada uu sameeyay taariikh ahaan wuxuuna ku qaatay abaal marinta Filmfare Critics Award for Best Performance
Sidoo kale isla sanadii 1994 wuxuu sameeyay filimka Anjaam oo ay Madhuri Dixit la sameesay wuxuuna ku qaatay abaal marinta laadarka ugu wanaagsan ee Filmfare bixiso Filmfare Best Villain Award.
Khan wuxuu sanadii 1994 yiri “Halis weyn ayaan u bareeray mana jirin atoore caan ah oo diyaar u ahaa sameynta wajiyada laadarnimada laakiin aniga halistii aan qaatay ayaan asaageyga kaga fiicnaaday!!”
SRK Iyo Markii Loo Aqoonsada Atooraha Filimada Jeceylka Looga Haray (1995 – 1998)
La yaab Khan sanadii 1995 wuxuu la yimid 7-filim waa arin qariib ah in xiligan la arko, filimkiisii kowaad 1995 wuxu ahaa Karan Arjun oo uu Rakesh Roshan lahaa waxaana la jileen Salman Khan iyo Kajol filimkan wuxuu noqday Blockbuster.
Laakiin filimkii uu Hindiya iyo caalamka ku qasbaday ayuu la yimdi qaybihii dambe ee 1995 waana Dilwale Dulhania Le Jayenge oo uu Aditya Chopra sameeyay waxaana la jishay Kajol.
SRK markii hore wuu ka madax adeegay inuu noqdo atoore jeceyl laakiin markii doorkan sameeyay asiga iska dhaaf dadka oo dhan ayaa kula taliyeen inuu marwalbo filimada qalbiga taabanayo qaato
Dilwale Dulhania Le Jayenge wuxuu noqday All Time Blockbustar SRK iyo dhamaan kooxda filimkan la jileen abaal marin walbo oo caalami ah iyaga ayaa aruursadeen waxaana lagu qaatay 10-abaal marin oo ay Filmfare bixisay oo ku jiro in SRK mar labaad atooraha ugu fiican la siiyay.
Sanadii 1996 SRK sanad mugdi ah ayay u ahayd dhamaan 4-filim ee uu sameeyay sheeko ahaan iyo Boxoffice ahaanba wey guul dareesteen waxayna kala ahayeen English Babu Desi Mem, Chaahat, Army.
Laakiin sanadii 1997 ayuu soo rogaali celiyay xidigan filimkiisii kowaad Yes Boss wuxuu noqday Hit filimkiisii xigay Pardes isagana Super Hit ayuu noqday halka filimkii Yash Chopra lahaa Dil To Pagal Hai oo ay SRK la jileen Madhuri iyo karishma Kapoor uu Blockbuster noqday.
Dil To Pagal Hai markale Khan wuxuu ku muujiyay inaan jilista jeceylka loogu dhawaan karin wuxuuna ku qaatay atooraha sanadka ugu fiican markii sedexaad
SRK sanadii 1998 sedex filim ee uu hogaamiye ka yahay ayuu la yimid laakiin labo filim wey ka qasaareen Duplicate iyo Dil Se balse filimkii laga yaabay ilaa haatan la hadal haayo ayuu la yimid Kuch Kuch Hota Hai kaasi oo All Time Blockbuster noqday
han dhibaato weyn ayaa soo gaartay xili uu wax ka duubayay filimka Shakti: The Power inkastoo uu muqaal marti ah ku lahaa hadana laf dhabarka ayaa jug xoogan ka gaartay taasi oo ku qasabtay inuu mudo kooban hawada ka maqnaado waxaana qaliin uu ku galay Wellington Hospital, London si xaaladiisa dhabarka loo xaliyo dhibka kasoo gaaray.
Sanadii 2001 SRK wuxuu dhigay rikoor caalami ah madaama filimkiisii Kabhi Khushi Kabhie Gham uu gudaha Hindiya Blockbuster ka noqday sidoo kalena uu suuqyada caalamka ka noqday All Time Blockbuster weliba iskoorka uu daafaha caalamka ka dhigay mudo 6-sano ah ayay ku qaadatay inay Bollywood-ka jebiyaan.
SRK sanadii 2002 markale awooda Bollywood-ka ayuu lasii wareegay madaama filimka uu Sanjay Leela Bhansali iska lahaa Devdas uu ku qaatay atooraha ugu wanaagsan wuxuuna Devdas markaas noqday filimka ugu qaalisan oo ay ebid Bollywood-ka sameeyaan madaama lagu qarash gareeyay 50 Crore (US$7.7 million) balse filimkan lacagihii la galiyay ka badan ayuu keenay 84 Crore (US$13 million) dhamaan suuqyada caalamka ayuu ka keenay.
Khan 2003 sanad wanaagsan ayuu u ahaa inkastoo atooraha sanadkan uusan qaadanin hadana filimadiisi guulo waa weyn ayay gudaha Hindiya iyo daafaha caalamka ka gaareen sheeko ahaana aadbaa loo amaanay labadiisii filim Kal Ho Naa Ho (2003) iyo Chalte Chalte.
SRK Iyo Soo Laba Kacleyntiisii Iyo Sameynta Iskoorada Dheeraadka Ah (2004 – 2009)
Sanadii 2004 King Khan waxay u ahayd sanad u qaas ah wuxuu sameestay shirkada Red Chillies Entertainment oo uu isaga gaar u leeyahay sidoo kalena xaaskiisa Gauri Khan ayuu madax kaga dhigay, filimkii ugu horeesay oo ay shirkadan maal galiso wuxuu ahaa Main Hoon Na oo noqday Hit weyn sidoo kalena lacago badan gudaha Hindiya iyo daafaha caalamka kasoo xareeyay wuxuuna soo xareeyay 68 Crore ($10M) gudaha iyo dibada isku darkooda.
Filimkiisa labaad Veer Zaara waa midkii uu Bollywood-ka kaga yaabsaday madaama uu noqday filimka lacagaha ugu badan soo xareeyay 2004 asigoo keenay 94 Crore ($14M) gudaha iyo dibada isku darkooda.
SRK dhamaadkii 2004 waxaa usoo baxay filimka Swades inkastoo filimkan ganacsi ahaan uu guul dareestay hadana sheeko ahaan mid caalami ah ayuu noqday wuxuuna ku qaatay atooraha ugu wanaagsan Bollywood-ka abaal marinta Filmfare bixiso.
Swades wuxuu noqday filimkii ugu horeeyay ee Hindi ah kaasi oo lagu dhex duubo xarunta cirbixiyeenka sida weyn looga dambeeyo ee NASA.
SRK sanadii 2006 wuxuu markale la shaqeeyay saaxiibkiis Karan Johar asigoo u sameeyay filimkii Kabhi Alvida Naa Kehna (2006), filimkan gudaha Hindiya guul dhex dhexaad ayuu ka gaaray balse suuqyada caalamka lacago xad dhaaf ah ayuu ka keenay wuxuuna soo xareeyay 113 Crore ($17M) waa isku darka gudaha iyo dibada.
Isla sanadii 2006 Khan wuxuu sameeyay filimka Don ee uu ku matalay labo waji sidoo kalena qaab jilinkiisa lagu amaanay wuxuuna filimkan noqday Hit weyn.
Sanadii 2007 ayuu King Khan markale awoodiisa cirka galiyay weliba waji cusub ayuu la yimid madaama uu dhanka Sports-ka tijaabiyay filimkiisii Chak De! India maamuus iyo maqaam ayuu ku helay waxaana lagu doodaa inuu mudnaa in sanadkan abaal marinta National Film Awarsd ee uusan weli ku guuleesanin lagu siiyo.
Chak De! India atooraha ugu fiican Bollywood-ka ayay shirkada Filmfare ku siisay sidoo kalena filimkiisii Om Shanti Om wuxuu noqday filimka ugu weynaa sanadii 2007 ee Bollywood-ka sameeyaan madaama uu Blockbuster noqday.
Khan sanadii 2008 wuxuu mar sedexaad la shaqeeyay saaxiibkiis Aditya Chopra wuxuuna u sameeyay filimkii Rab Ne Bana Di Jodi oo ay la jishay Anushka Sharma, cajiib filimkan wuxuu noqday Blockbuster sidoo kalena bandhig ahaan iyo sheeko ahan wuxuu ka mid noqday aflaanta ugu wanaagsan ee uu SRK sameeyo.
Bishii December 2008 Khan dhaawac dhanka garabka ah ayaa soo gaaray xili uu duubayay filimkii Dulha Mil Gaya taasina waxay ku qasabatay inuu mudo filim jilista ka nasto.
King Khan Iyo Awoodiisa Super Star-nimo Weli Waa Mid Taagan (2010 Ilaa Haatan)
Baadshah of Bollywood nasiib xumo wuxuu iska diiday filimka Slumdog Millionaire (2008) oo ahaa filim caalami ah waxaana booskii uu diiday aqbalay inuu matalo Anil Kapoor.
SRK ayaa midaas kaga jawaabay inuu sameeyo filimka My Name Is Khan (2010) waana filim caalami ah oo fariin adag xambaarsanaa.
SRK ayaa ku fikiraayay sanado badan inuu sameeyo filim muujijaanyo in qof walbo oo Muslim ah uusan argagaxiyo ahayn wuxuuna ka dhabeeyay fikradiisa inuu caalamka la wadaago asigoo saaxiibkiis Karan Johar kaashanaayo.
Khan filimkan abaal marintii 8-aad ee Filmfare ayuu ku qaatay wuxuuna bar bareeyay rikoor Dilip Kumar u yiilay oo horey 8-jeer biladan ugu guuleestay.
SRK filimkiisa My Name Is Khan wuxuu noqday filimka ugu weynaa oo ay ebid Bollywood-ka sameeyaan kaasi oo suuqyada caalamka rikoor ka dhigo madaama uu $25M soo xareeyay daaafaha caalamka.
SRK sanadii 2011 wuxuu la yimid labo filim oo xiliyada fasaxa ah la saaray Ra.One iyo Don 2 labadan Hit dhameestiran ayuu mid walbo noqday laakiin filimka Don 2 ayuu xidigan amaan fara badan ku helay Action-ka uu kusoo bandhigay sida uu tuuganimada filimada Bollywood-ka lagu jilo uga dhigay mid caalami ah.
King Khan sanadii 2012 wuxuu dib ugu laabtay sameynta filimada jeceylka ah wuxuuna sameeyay filimka Jab Tak Hai Jaan uu iska lahaa saaxiibkiis Yash Chopra waana filimkii ugu dambeeyay ee Yash Chopra sameeyay madaama uu geeriyooday ka hor inta uusan filimkan soo bixin.
Khan shuruucdii lagu yaqiinay ayuu ku jebiyay filimkan madaama uu markii ugu horeesay shaashada horteeda atirisho shumis dhanka faruur yaha la wadaagay waana Katrina Kaif!!
Jab Tak Hai Jaan wuxuu noqday filim Hit ah balse marnaba dib uma soo celinin filimkan mucjisadii Khan iyo Yash Chopra looga bartay inay filimada kusoo bandhigaan wuxuuna iska noqday filim iska dhex dhexaad ah!
Sanadii 2013 SRK wuxuu la yimid filimkii Bollywood-ka gil gilay Chennai Express wuxuuna xidigan jebiyay rikoorkii Aamir Khan u yiilay madaama filimka 3 Idiots uu 4-sano ahaa filimka lacagaha ugu badan soo xareeyo gudaha Hindiya laakiin Chennai Express ayaa rikoorkiisa dhaafay.
Sidoo kalena Chennai Express wuxuu soo xareeyay 400 Crore ($61M) waa isku darka gudaha Hindiya iyo daafaha caalamka wuxuuna Khan ka helay macaash waali ah.
Sanadii 2014 Khan wuxuu la yimid filimkii Super Hit-ka noqday Happy New Year ee Diwali la daawaday filimkan guul weyn ayuu gaaray balse dadka taaageerada u ah Khan waxay ku dhaliileen kaliya inuu ganaciga xooga saaray balse uusan la imaanin sheeko cajiib badan.
SRK Iyo Cadaadiska Saaran Sida Uu Isaga Dajin Karo:
Khan dadka ka faaloodaan filimada waxay u arkaa in xidigan uusan haatan xooga saarin sameynta filimada sheekooyinka wacan leh ee uu ku caan baxay.
My Name Is Khan (2010) wixii ka dambeeyay Khan ma sameynin filim siweyn sheekadiisa loola cajabay waa run aflaantiisa guulo waa weyn ayay gaareen laakiin sheekadii looga bartay lagama haayo Khan.
Hadaba sanadkii 2015 dhamaadkiisa waxaa usoo baxay filimka Dilwale oo ay dib ugu midoobeen Kajol waana filim Action iyo jecel isugu jiro guul dhex dhexaad ahna gaaray..
Sanadkii 2016 waxaa usoo baxeen filimka Fan iyo Dear Zindagi oo uu door caawiye ah kulaha sido kale labadii filim ee sanadkaan usoo baxeen Raees iyo JHMS wali awoodusa kuma soo chena maadama JHMS ka guuldarestay halka Raees guul dhexdhexaad ah u gaaray sidaa darteed waxa isha lagu heyn doono kaliya ma ahan inuu dhigo rikooro caalami ah sidoo kale Khan waxaa laga rabaa inuu la imaado sheeko uu ku qaadan karo atooraha ugu wanaagsan Bollywoo-ka.
Waayo Super Star-kan wixii ka dambeeyay 2010 atooraha ugu wanaagsan kuma uusan guuleesanin mana ahan wax looga bartay Khan in mudo 5-sano ka badan inuu bilada Filmfare moogaado!!
Sidoo kale xidigan waxaa saaran cadaadis xoogan madaama ay labada xidig oo ay sida gaarka ah u xifaaltamaan Aamir Khan iyo Salman Khan filimadooda gudaha Hindiya 300 Crore kasoo xareeyeen SRK waxaa looga fadhiyaa in filimadiisa xiga ay darajadan 300 Crore Club gaaraan.
Khan Iyo Noloshiisa Gaarka Ah Iyo Ganacsiga Uu Sameeyay:
SRK waxay mudo 6-sano ah jeceyl wada jilayeen gabadha Gauri Chibber sidoo kalena xili badan ayay isla qaateen, waxayna is barteen xili uu xidigan halgan ugu jiray inuu shaqo helo,
Gauri Chibber ayaa siweyn SRK u caawisay gaar ahaan dhanka niyad dhiska noloshiisa marka ay dhibaato lasoo daristay.
Labadan lamaane waxay si rasmi ah u aqal galeen 25 October 1991 kadib 6-sano oo ay shukaansi wadeen weliba guurkooda labo siyaabood ayaa loo dhigay sida Diinta Islamka qabto iyo sidoo kalena dhanka Hinduuga arooska sida ay u dhigtaan.
Labadan lamaane wiilkooda curudka ah Aryan Khan wuxuu dhashay sanadii 1997 halka gabadhooda Suhana ay sanadii 2000 dhalatay
Sidoo kale wiilkooda yaraanka ah AbRam Khan wuxuu dhashay 2013 balse nidaam muran badan dhaliyay ayuu ku dhashay waayo AbRam naag kale ayaa uurka ku qaaday 9-bilood caloosha ku siday waxaana lagu dhalay nidaamka loo yaqaan (surrogate).
Khan wuxuu sheegay inuu yahay qof Muslim ah diintana Islamka ku xeel dheer sidoo kalena wuxuu sheegay inuu tixgaliyo sidoo kalena qiimeeyo diinta Hinduuga oo ay xaaskiisa Gauri Khan aaminsan tahay.
Sidoo kale wuxuu sheegay in caruurtiisa labada diimood ay ku dhaqmaan Islam iyo Hindu laakiin wuxuu sheegay marka ay guriga wada joogaaan caruurtiisa in ku dhaqanka diinta Islamka iyo aqriska Quranka uu mudnaanta kowaad leeyahay balse sidoo kalena dhaqanka Hinduuga iyo xafladaha ay dhigtaan sanad walbo ay Gauri Khan kula dabaal dagaan.
Dhanka kale SRK wuxuu leeyahay kooxda Cricket-ka cayaarto ee lagu magacaabo Kolkata Knight Riders (KKR) waxayna isla iibsadeen sanadii 2008 kooxdan Juhi Chawla iyo seygeeda Jay Mehta ayagoo ku iibsadeen milkiyadeeda $75.09M.
edexdii sano ee ugu hooresay SRK kooxdiisa hoos u dhac ayaa heestay sidoo kale qarash badan ayaa kaga baxay balse sanadii 2012 iyo 2014 horyaalka Hindiya ee Cricket-ka ayay ku guuleesatay wuxuuna Khan ka helay lacago badan kooxdan.
Khan waa hantiile awood badan wuxuu ganacsi badan ku leeyahay meelo ka baxsan Hindiya sidoo kalena xidigan dhismo aad u weyn oo magaalada London ku yaalo wuxuu ku iibsaday £20 million sidoo kalena Villa aad u weyn wuxuu ku leeyahay dhismaha Timirta ee Dubai (Palm Jumeirah in Dubai).
SRK waa shaqsi si walbo daqli u abuuro waxaa la sheegay in xidigan hadii lagu casumo aroos gudaha Hindiya ka dhacaayo ama daafaha caalamka ka qayb galka kaliya inuu ku qaato $15,000!
Hadii uu heshiiska ku jiro inuu arooska ka cayaaro ama uu maalmo goobta ku sugnaado wuxuu qaataa $200,000 (Rubac Malyuun doolar)!!
F.G: Warbixintaan Horey Ayaa Loo Daabacay Qaasatan Walaalken Zakarie Abdi Ayaa Daabacay Anagana DIb Ayaan Usoo Update Gareenaya Maadama Aad Idinka Naga Codsateen….
Waad Ku Mahdsantahay Aqriskaaga.
Waxaa Aqrisay 4,358
9 Responses to Taariikh Nololeedka Shah Rukh Khan, siduu ku gaarey heerka maanta, dhibtii soo martey, rikoorada uu dhigay, fashilka qabsadey, hantidiisa, iyo noloshiisa gaarka ah (Oo Update Ah)
Shahrukhan muslim ma noqon karo waayosuuragal ma aha in qof laba diimood kuwada dhaqmo sharukhan oo kaliya maaha balse islaamka hindiya badankoodu waa kuwo aanu warkoodu caddayn
Bahda Flimside wxn idinka Codsanayna Inaad Noosoo gudbisaan Xurguftii Dhexmartay Sharukhan Iyo Suiny Daol
638 qof baa aqrisay umana jeedo cid dhahday mahadsanid soomali
thnaka filimside waad Ku mahadsantihiin sida fiican ee aad bulshada ugu adeegeesaan thanks filimside iyo dhamaan shaqalaheda
Zxp Ali adan Aad bad Umahadsantahay adi iyo Asxaabtada Lkn Zxp Flimkee kumuujiyey inaysan Muslimiintu Argagaxiso ahayn
maxamed hassan eng haadi
thanks bahda filmsude
maxa laga mahad celiya ma wax ficana sheektay !
SRK muslimnimda waxaa ku qasbaya nolashiisa hare mana shaqsi iloobi kara dhaqnka hinduga waana sida aan qabo